तालबाराही मन्दीर अगाडी देखियो यस्तो आरती ! हेर्दा पनि आनन्द आउने ! हेर्नुहोस आनन्द लिनुहोस - Enepalese.com
तालबाराही मन्दीर अगाडी देखियो यस्तो आरती ! हेर्दा पनि आनन्द आउने ! हेर्नुहोस आनन्द लिनुहोस
इनेप्लिज २०७५ कार्तिक २६ गते २:५२ मा प्रकाशित
धार्मीक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पोखराको तालबराहीमा नित्य सन्ध्याकालिन आरती भैरहेको छ ।